Umkhiqizi kanye Nomphakeli Omkhulu Wokudla Kwesikhwama Esikhulu se-10-50kg GAOGE
Umshini wokupakisha wesikhwama se-10-50kg Pet Pet
Kunembile kakhulu. Kufika Kuzikhwama ezingama-20 / Min. Manual futhi okuzenzakalelayo. Izixazululo Zokugcwalisa Isikhwama. Izicelo zezolimo, ezokudla nezimboni.
I-GW-550 Automatic Pet Food Big Bag Ukupakisha Umshini weyunithi ilungele ngokukhethekile okokusebenza kweGranular, okusemaphaketheni yisikhwama sephepha, isikhwama se-PE, isikhwama eselukiwe, uhla lokupakisha luyi-10-25kg, isivinini esikhulu singafinyelela ku-3-8bags / min. Ukusebenza kahle okuphezulu, idizayini ethuthukile elungele izidingo ezahlukahlukene
Ilayisi, Ukolweni, ama-Pulses, ama-Granules, i-Powder, Amakhemikhali njll.
umshini wokupakisha othomathikhi ngokuphelele wezikhwama ezivulekile zomlomo ezinezinga eliphakeme. Ingasetshenziselwa ukupakisha izikhwama ngezinto ezahlukahlukene, ikakhulukazi izikhwama ezilukiwe ezinokumbozwa kwepulasitiki. Olayini bokupakisha batholwe kahle eThailand SIAM Company, engenye yezimboni ezinkulu zokulungisa irayisi emhlabeni. Ulayini wokupakisha wakhiwe uma umshini wokufaka othomathikhi othomathikhi, umshini wokupakisha othomathikhi, i-mesh-belt conveyor, umshini wokuphakela isikhwama, ukuguqula isikhwama se-flattener kanye nesistimu yokulawula, njll.
Isethi yonke yezinqubo zokucubungula kufaka phakathi ukudluliswa kwezinto, ukukala, ukugcwalisa, ukupakisha, ukuthambisa isikhwama, ukufaka uphawu, ukuthunga nokudlulisa kungaqedwa yimishini. Imishini yethu ingenziwa uku-oda futhi yakhelwe ngokuya ngemfuneko yekhasimende.
ivumela ukuthi ifinyelele ku-20 BPM
Iyashesha futhi ithembekile
Kudinga isikhala esincane
Kuyashesha futhi kulula ukuyifaka futhi uyiqale
Yehlisa inani lokulimala phakathi kwabasebenzi
Ihambisana nawo wonke uhlelo lokuvala
1. Ukulinganisa okuzenzakalelayo kwenani okuzenzakalelayo
2.Automatic isikhwama-supply isigaba
3. Ingxenye ongayikhetha efana ne-air compressor
Isigaba se-4.Automatic esikhwameni esikhwameni
5. Okuzenzakalelayo ibhande elihambayo
Umshini wokuthunga / wokuvala othomathikhi
7. Okuzenzakalelayo isikhwama-emuva kwesigaba
IKhabhinethi yokulawula ithuluzi kagesi
1. Ukukha isikhwama, isaka lokudla, izinto zokugcwalisa, ukufaka isisindo, ukuthunga / ukufaka isikhwama, ukubuyela emuva esikhwameni nokudluliswa kwesikhwama kuqediwe ngokuzenzekelayo.
2. Ukwamukela i-PLC ukuqinisekisa ukuthembeka kokulawula
3. Ukwamukela transducer ephezulu-ngokunemba futhi ithuluzi elihlakaniphile ukuqinisekisa ukunemba nesivinini sesisindo
4. Ukwamukela isikrini sokuthinta ngenkinga yokubonisa kanye nesistimu yosizo yokusebenza okulula.
5. Ukwamukela izingxenye zomoya ezingenisiwe kufaka ukwakheka okuhlangene, ukusebenza okuthembekile nokulungiswa okulula.
6. Umshini wokuthunga / wokufaka uphawu ngumshini ongenisiwe.
Ukupakisha Into impahla luyimbudumbudu
Izinto 1- isikhwama sephepha
2- isikhwama eselukiwe (esigcwele ifilimu le-PP / PE)
3- isikhwama sepulasitiki (ukujiya kwefilimu ≥0.2mm
Ubukhulu (700-850) * (400-500) (L * W)
Isisindo impahla eyimbudumbudu 10- 25kg
Uhlobo Seal Isikhwama nokwelukiweyo lura ukusonga / ukuthunga
Isikhwama sephepha se-Kraft ukubekwa uphawu / ukuthungwa
Isikhwama sefilimu esiyinhlanganisela ukubekwa uphawu
Umshini Ijubane Izikhwama ezi-6 - 14 / iminithi (eziguquguqukayo)
Ukunemba kokulinganisa ± 50g
Ukuphakelwa Komoya 0.5 - 0.7 MPA
Amandla 4.0kw 380v ± 10% 50Hz
Umshini Wephakheji Ubukhulu 4300 * 3500 * 3700
Langaphambilini Umugqa Wokupakisha Umshini Wokugoqa Umlomo we-Granule Ozenzakalelayo
Olandelayo: Umshini Wokuphakela Izinyoni Womlomo Ovulekile
5-50kg umshini wokugeza Powder Ukupakisha Machine Open-mo ...
Okuzenzakalelayo Umanyolo Bagging Ukupakisha Machine Op ...
5-50kg okuzenzakalelayo Chemical Product Ukupakisha Machi ...
Okuzenzakalelayo Suger Ukupakisha Machine Open-umlomo Bag ...
Umshini Wokupakisha we-Manual Bagging Machine